वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : October 2009
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ October 27, 2009
रात नसकिँदै झुल्किन्छ हिमाल कुन खुशिले टल्किन्छ हिमाल!
('अल्किनु' अग्लिनुको अर्थमा प्रयोग गरिएको हो।) - नोभेम्बेर २३, २००५
अहिले त्यस्तो चिन्तन अलिक कम भईसकेको हुनुपर्छ तर १५-२० वर्ष अगाडिसम्म भने नेपालमा 'ठूलो भुँडी' सम्पन्नताको आम प्रतीक जस्तै थियो। कुनै मान्छेको भुँडी जति ठूलो भयो, ऊ त्यत्तिकै 'खान्दानी' र 'खाएलाएको' मानिन्थ्यो। ठूलो भुँडीले ठूलाबडाको ब्यक्तित्वमा निखार ल्याएको मानिन्थ्यो। धेरै लाल-बुझक्कडहरु दौरा-सुरुवाल-कोट ठूलो भुँडी भएकालाई मात्रै सुहाउने गफ पनि दिन्थे। यो गफ मैले आफ्नै उमेरका साथीहरुबाट अचेल पनि सुनेको छु यदाकदा। अरु कुनै विशेष 'रोग' नभएको अवश्थाको ठूलो भुँडी आफैं एउटा रोग हो, अस्वस्थ जीवनशैलीको प्रतिफल हो, धेरै रोगहरुको मुहान हो। यो रोगका जिम्मेवार दुई भाइमा, एउटा खानपीनको गलत तरिका हो। शरीरभन्दा जिब्रोको कुरा धेरै सुन्नु मानवीय स्वभावनै हो, जो जति हुने-खाने भयो, उति जिब्रोतिर लहसिँदै जान्छ। हाम्रो समाज यस्तै छ, कोहि राम्ररी खान नपाएर रोगी छन्, कोहि धेरै र मनपरी खाएर रोगी छन्।
अर्को भाइचाहिँ, शारीरिक श्रमविनाको दिनचर्या। हाम्रो समाजमा श्रम र त्यसमा पनि शारीरिक श्रमलाई एकदमै तल्लो कोटिको मानिन्छ। अलिकति मात्रै भौतिक सम्पन्नता आउनसाथ मान्छेहरु शारीरिक श्रम गर्न चाहँदैनन्। शारीरिक श्रम गर्नु भनेर कारखानमा मजदूरी गर्नु वा खेतीपातीमा काम गर्नुमात्रैलाई भनेको होईन, सबै मान्छेले त्यस्तो काम गर्नु सम्भव र आवश्यक पनि छैन। शरीरका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम 'शारीरिक' गतिबिधि थोरै खेलकूदले पनि पूरा गर्नसक्छ। खासमा नियमित खेलकूद स्वस्थ र सभ्य समाजको जीवनशैलीको, संस्कृतिको एउटा महत्वपूर्ण भाग हो। हाम्रो समाजको एउटा ठूलो समस्या पनि यहीँनेर छ। हाम्रो जीवनशैली र संस्कृतिमा खेलकूदलाई कुनै महत्व दिईएको छैन।
भुँडीबाट कुरा शुरु गरेर कता-कता लग्यो यसले भन्नुहोला। तर कुरो भुँडीकै हुनेवाला छ। भुँडीको कुरो- यो भुँडी पुराण मेरा मनमा पाक्नाको कारण पनि बताईदिईहालौं-आफ्नै भुँडीले गति छोड्नाले हो। कुरो के भने केहि महिना यता भुँडी महाविष्फोट (Big Bang) पछिको ब्रम्हाण्डजस्तो अचम्मसंग बढ्न थालेको छ। हुनत पहिला पनि आफनो भुँडी सटक्क ताछिएको त कहाँ हो र तैपनि काम चलेको थियो। नेपालमा हुँदा त बिल्कूलै समस्या थिएन, अलि-अलि 'कमाएको', 'खाए-लाएको' र 'ईज्जतदार' देखाऊँथ्यो त्यसले:) तर मोटा मान्छे देख्न सुमो कुश्तीबाजहरुको अखाडानै पुग्नुपर्ने जापान जस्तो 'फिटनेस फ्रीक' ठाऊँमा भने त्यै पनि ठूलो देखिने! कहिलेकाहिँ 'आवश्यक' पर्दा बलैले भित्रसम्म खिँचेर ताछिएकोजस्तो बनाउने कोशिश गरिन्थ्यो (गफै त हो!) तर जतिखेर पनि त्यसो गरिरहन सक्ने कुरो भएन।
यो 'महाविष्फोट'ले एकजना पुराना सहकर्मी साथीको याद दिलायो। उनको भुँडी निकै ठूलो थियो, कसैले उनको भुँडीको कुरो उप्कायो कि उनी "मेरो भुँडी के भुँडी? राधाकृष्ण मैनालीको भुँडी पो भुँडी!" भन्थे। तिनको भनाई अनुसार राधाकृष्ण मैनालीलाई आफ्नै खुट्टा हेर्न ऐना चाहिन थाल्या पनि ३०-३५ वर्ष भईसक्यो रे! राधाकृष्ण मैनालीले नुहाऊँदा टाउको अथवा जीऊमा खन्याएको पानी खुट्टातिर नगई सोझै भुईँमा खस्छ रे! (यो कुराका अरु फरक पात्र र केहि 'नन-भेज' संस्करण पनि नभएका होईनन्।) मैनालीजीलाई देखेका जो कोहिले पनि पत्याउने खालकै कुरो हो यो।
चाँडै 'राधाकृष्ण मैनाली क्लब'मा पुगिने पिरलोले पोल्न थाल्यो मलाई। मैनालीजीको त उचाई पनि धेरै छ, हातखुट्टा पनि उस्तै 'खाईलाग्दा' छन्। ठूलो भुँडि भयो भने मेरा मसिना हातखुट्टा त मुछेको पिठोको डल्लोमा सिन्का गाडेजस्ता देखिने भए! अजबको जन्तु देखिने भएँ म त!
त्यो क्लब जानु पर्ने स्थिति आउन नदिने निधो गरें। पहिला खानपीनको कुरोबाट हेर्न थालें। त्यस्तो गरिष्ठ 'खान' गर्ने मान्छे म होईन। 'पीन' पनि 'हप्तामा १-२ क्यान'मा सीमित छ; त्यो 'सोसियल ड्रिन्किङ' भन्छन् नि, हो त्यहि हो क्या:) त्यसैले 'खानपीन'मा जोड-घटाऊ गर्नुपर्ने कुरा खासै देखिएन। कुरो आयो उहि शारीरिक श्रमकै। यस्सो सम्झिल्याऊँदा, जीऊमा ताल्चा लगाएर बस्या कम्तिमा पनि एक दशक काटिसकेछ। मेरो भुँडीको महाविष्फोटको कारण यहि हुनुपर्छ। साँझ-बिहान अलिकति दौडधूप, खेलकूदनै एउटै उपाय देखियो। साँझ समय निकाल्न सक्ने भन्या पनि त्यस्तै हो, त्यसैले बिहान अलिक चाँडै उठेर कुद्ने निर्णय भयो। निर्णय त भयो तर कार्यान्वयन भएन, नेपाली पारा क्या:) 'अल्छीको बात जैसीले जान्दैन' भन्याजस्तै' "नजिक त्यस्तो ठूलो चउर, पार्क पनि छैन, के कुद्नु खै?" भन्ने बहानाको बिर्को लगाईयो निर्णयमा र सकेसम्म ढिला उठ्ने 'शुभ' कामलाई निरन्तरता दिईयो। बहाना चाहिएको थियो, भेट्टाईयो, नत्र मध्य शहरमै पनि सडकपेटीमा स्वास्थ्य-सचेत मान्छेहरु कुदिरहेका नदेखिने होईनन्!
एक महिना पहिला अहिलेको गुँडमा सरेपछि मेरो त्यो बहानाको बिर्को जबर्जस्ती खुल्यो।
नजिकै TENPAKU-GAWA (थेनपाकु खोला) छ। त्यो खोलाको दुबैतिर बाढी नियन्त्रण गर्न बनाईएको तटबन्धमा कतै दुई-कतै तीन तहमा फराकिला समतल संरचना छन्। नदीको शहरभित्र पर्ने लम्बाई पूरैमा निर्माण गरिएको छ यस्ता संरचना (सबैभन्दा माथिल्लो तह गाडीनै हिँड्न मिल्ने गरी पीच गरिएको छ, तर गाडी हिँडेको देखिँदैन।)। त्यहाँ जतिखेर पनि मान्छेहरु कुदिरहेका, हिँडिरहेका र जीऊ मर्काईरहेका देखिन्छन्। साँझ-बिहान त भिडै हुन्छ त्यहाँ। बिहान खोलाको किनारमा ध्यान गरेर बसिरहेकाहरु पनि देखिन्छन्। अब पनि भुत्ते बहानालाई बोकेर बसिरहन मन लागेन र सबेरै खोलाको किनारमा पुग्न थालें।
तर जीऊका ताल्चाले चुँडिन मानेका भए पो!
दुई-चार दिन अलि-अलि हिँड्ने, अलि-अलि कुद्ने गरेपछि एक दिन झोंक चलेर आधा घण्टा कुद्देको, झण्डै थला परेको! बाफ रे बाफ!
वास्तवमा वर्षौं 'नखाई' बसेर यस्तरी एकैचोटि 'धेरै खाएर' आफैंलाई 'छेरौटी लगाऊनु' ठीक थिएन। त्यसैले हल्का हिँड्ने र बिस्तारै समय र गति बढाऊँदै लैजाने क्रममा छु।
'महाविष्फोट'लाई नियन्त्रण गरेर गतिछाडा भुँडीलाई तह लगाउन सकेपनि-नसकेपनि यो कुरा भने पछि पनि गर्दै गरौंला। बरु हजुरको भुँडी कत्तिको गतिछाडा छ कुन्नि:)
आज नेपालमाताका एक महान सुपुत्र लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको सैयौं जन्मतिथि हो। नेपाली साहित्यको लागि उहाँको योगदानको जति चर्चा गरेपनि कमै हुन्छ। नेपालमा उहाँको जन्म शतवार्षिकीका उपलक्षमा धेरै कार्यक्रमहरु भईरहेको हुनुपर्छ।नागोयामा केहि उत्साही भाइबहिनीहरुले भोलि एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछन्।महाकवि देवकोटामा हार्दिक श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्दछु!!यसै प्रसंगमा यूट्युबको यो भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु, आफनो जीवनको अन्तिम घडीमा रहनुभएका महाकविको स्वर सुन्न सकिन्छ यसमा। बिबिसी नेपाली सेवा र भिडियो तयार पार्नुहुने महानुभावलाई धेरै-धेरै धन्यबाद!हस् त, तपाईँ र परिवारमा दिपावली, नयाँ वर्ष (नेपाल सम्बत ) ११३० र छठको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँका दिनहरु शुभ रहुन्!
चार वर्ष पहिला लक्ष्मी-जयन्तीको उपलक्षमा आयजित एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा एकजना साथीले प्रस्तुत गर्नुभएको (ब्यंग्य) गजल पढेको थिएँ। मलाई रचनाकार साथीको नाम याद छैन, न त पूरै गजल र ठ्याक्कै शब्दहरु याद छ; तर सार भने यस्तो थियो- हामी साना-कमजोर मान्छेले जे बोलेपनि-जति बोलेपनि जे गरेपनि-जति गरेपनि के अर्थ हुन्छ र? कस्ले पूच्छ, कसले भाऊ दिन्छ र? ‘हजुर’ जस्ता ‘ठूलाबडा’ पो महान त! हजूरले त बोले पनि गजल बन्छ, खोके पनि दुनियाँमा हलचल हुन्छ।अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामालाई यस वर्षको शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार दिईएको समाचार सुनेपछि सबैभन्दा पहिला मेरो मनमा आएका शब्दहरु भने ठ्याक्कै यिनै हुन्; “बोले गजल, खोके हलचल!”। गजल रचना गर्ने महानुभावलाई पनि सादर र सधन्यबाद सम्झिएँ, उहाँले नेपाललाई मात्रै सुहाउने होईन पूरा विश्वलाईनै सुहाउने कृति सृजना गर्नुभएको रहेछ।अमेरिकी राष्ट्रपति एउटा ब्यक्तिमात्रै नभएर एउटा संस्था-एउटा अत्यन्त जटिल कर्मचारीतन्त्र पनि हो। प्रागमा ओबामाले बोलेका सबै कुरा पूरा हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी ओबामाले पनि गर्न सक्दैनन्। ब्यक्तिगत रुपमा ओबामा असल र संवेदनशील हुन सक्छन्, अहिलेसम्म त्यस्तै देखिएका पनि छन्। उनको ब्यक्तिगत जीवन-कथा पनि जो कोहिलाई प्रभावित पार्ने खालको निश्चय पनि छ। म पनि उनलाई एकजना प्रेरणादायी ब्यक्तितवको रुपमा लिन्छु। तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा गत नौ महिनामा उनले कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि दिन सकेका छैनन्। झन् विश्वशान्तिको लागि त एक हिसाबले उनी र उनको प्रशाशनले माखो पनि मारेको छैन। भित्र-भित्र केहि भईरहेका होलान् र तिनले भोलि राम्रै परिणाम ‘देलान्’, तर ‘देलान्’ र ‘दिए’ वा ‘दिईसके’ बिल्कूलै फरक कुरा हुन्। उनको पदावधिको तीन चौथाई भन्दा बढी अवधि बाँकीनै छ, त्यसैले उनी एउटा शान्तिप्रिय-विश्वशान्तिका लागि कटिबद्ध राष्ट्रपति हुने सम्भावना जति छ एउटा कट्टर युद्ध-पिपासु राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कसै-कसैलाई ओबामा युद्ध-पिपासु हुने कुरा असम्भव लाग्न सक्छ तर राजनीतिमा र झन् विश्व-राजनीतिमा केहि पनि असम्भव हुँदैन।मूल कुरो त के हो भने हाम्रो समयले, इतिहासले ओबामाको परीक्षण गरिररहेको छ, परिणाम सुनाईसकेको छैन। नोबेल पुरस्कारका लागि 'पजनी' गर्नेहरुले भने समय र इतिहासभन्दा अगाडि बढेर फैसला सुनाईदिए! 'हामी विश्व शान्तिका लागि कटिबद्ध छौं। हामी सम्पूर्ण आणविक हतियार नष्ट गर्न चाहन्छौं, संसारलाई आणविक हतियार मुक्त बनाउन चाहन्छौं।‘ भनेर खोकेकै भरमा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने हो भने हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई, त्यो पनि वर्षैपिच्छे नोबेल पुरस्कार दिनुपर्ने हुन्छ किनभने सबै अमेरिकी राष्ट्रपति त्यस्तै कुरा गर्छन्। भियतनाम ध्वस्त बनाउने जोन्सन र निक्सन वा हिजोसम्मका बुश सबैले भन्ने त्यहि हो। आणविक हतियार सबैभन्दा धेरै उनीहरुसंगै छ, त्यसैले ‘हामी आणविक हतियार नष्ट गर्छौं! गर्छौं-गर्छौं!’ भनेर खोक्न उनीहरु मात्रै सक्छन्। हुँदै-नहुनेले त खोक्ने कुरै भएन।यो संसारको अहिलेको अशान्तिको एउटा मूल कारण अमेरिका आफैं हो, उसको महाशक्ति-दम्भ हो। त्यसैले संसारमा शान्ति ल्याउनका लागि उसले स्वाभाविक रुपले धेरै गर्नैपर्छ, दम्भ त्याग्नैपर्छ। ओबामाले अमेरिकालाई त्यो दिशामा लैजाउन्, संसारको आशा भने त्यहि हो।शान्ति र साहित्यको लागि दिईने नोबेल पुरस्कार धेरैजसो विवादमा परेका छन्। शुद्ध विज्ञानका विधा वा अर्थशास्त्रमा पुरस्कार दिनका लागि योग्य ब्यक्ति छान्न शान्ति वा साहित्यका लागि छान्नुभन्दा सजिलो हुन्छ। विज्ञान वा अर्थशास्त्रमा कसैको अध्ययन-अनुसन्धानले पारेको दूरगामी असर सजिलै अनुभूत गर्न सकिन्छ। यदाकदा असन्तुष्टिका स्वर सुनिएपनि चिकित्साशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा योगदान पु-याएबापत दिईएका नोबेल पुरस्कार गम्भिर विवादमा त्यति परेका छैनन्। शान्ति र साहित्यको हकमा भने नोबेल पुरस्कार धेरैजसो नोबेल पुरस्कार कमिटिका मान्छेहरुले आफ्नो मान्यतालाई प्रक्षेपण गर्ने-पुरस्कारको आवरणमा एक खाले राजनीतिक घोषणा गर्ने माध्यम बनेको छ।विगतको साम्यवादी र पूँजीवादी प्रतिस्पर्धाकालमा प्रदान गरिएका शान्ति र साहित्यका नोबेल पुरस्कार विवादित भएका कैयौं उदाहरण छन्। साम्यवादी शाशन गोल्खाडी भएपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार मानव-अधिकार र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि प्रदान गर्न थालिएको थियो, यो राम्रो कदम थियो। राजनीतिज्ञहरुको जमातमा योग्य कोहि नभए संसारभरि मानव अधिकार र वातावरणको क्षेत्रमा विना कुनै स्वार्थ काम गरिरहेका हजारौं मान्छेहरुबाट छान्न सकिन्थ्यो होला यस पटक पनि।यूरोपीयनहरु अमेरिकाको डेमोक्रेट पार्टीका नेताहरुलाई विशेष मन पराऊँछन्। उनीहरुको त्यहि विशेष 'मन पराई' कै विस्तार हो ओबामालाई प्रदान गरिएको यो नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि। अर्कोतिर, पहिलो 'अश्वेत' अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नोबेल पुरस्कार दिएको अर्को 'राजनीतिक घोषणा' पनि मिसिनेनै भयो यस पटक।शक्तिमा हुनेले खोकेको भरमा पुरस्कार पाउने र अरुले जति योगदान दिएपनि नोबेल पुरस्कार दिनेहरुको आँखा नलाग्ने भएपछि यो शान्ति पुरस्कार खारेज गरे पनि हुन्छ अब।-----------------------------------------------------------टोकियोका साथीहरुसंग सम्पर्क गरेर त्यो गजल पूरै हात पारेर फेरि पढ्ने र रचनाकारज्यूलाई धन्यबाद दिने सूर छ अब:)
समय बाँझै छ!
बुख्याँचाले लडाईँ ओगटेका छन्
साला मूसाहरुले दाईँ ओगटेका छन्
बैंशालु समय अझै बाँझै छ
बूढा गोरुले गाई ओगटेका छन्!
(मे ८, २००७)
नेता बिहान रिबन काट्दै मसंग उल्टो कुरा छाँटे
दिऊँसो तिमीसंग कुराको अर्कै चुल्ठो बाटे
यसरी दिनभरि क-कस्को दिमाग चाटे कुन्नि
साँझ के परेथ्यो, आफैंलाई पनि ढाँटे!
(मे १८, २००७)
नेताले भोज खाए लोकले देख्यो, नेताले मजाले 'भोज' डकारे
बाहिर पो तेत्ति मात्रै, भित्र कुन्नि के के सकारे!
नयाँ 'क्रान्तिकारी' भाषणको 'अर्डर दिएर सुते नेताजी
बिहान उठ्नासाथ एक राउण्ड चर्को 'लालसलाम' खकारे!
'नहुने'हरु त नभएर मागिरहेछन्
तर, हुनेहरु चाहिँ के मागिरहेछन्?!
'माग्ने'हरुको हूल ठूलो, 'दिने' कल्ले?
'दिन' भनेर बसेकाहरु, आफैं मागिरहेछन्!
(मे २५, २००७)
दिऊँसै छिमेकीको पिँढी ढुक्दैथ्यो
अँध्यारोमा झन् के-के का लागि झुक्दैथ्यो
कुकुर चानचुने होईन जस्तो छ-
देशै खाईदिन्छु भनेर भुक्दैथ्यो! (फेब्रुअरी १३, २००९)
(Image Source:Click Here) यसपालिको दशैं गुँड सर्ने र नयाँ गुँडमा ब्यवष्थित हुने मेसोमै सकियो।